Dhalinyarada degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ka cabanaya shaqo la’aan. – Radio Daljir
Diseembar 13, 2012 7:07 b 0
Luuq, Dec, 13- Dhalinyarada ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka cabanaya shaqo la’aan baahsan oo soo wajahday dhalinyarada degmadaasi.
C/raxmaan Maxamed Shaakaal oo ka mid dhalinyarada Luuq oo aan taleefoonka kula sheekaystay ayaa ii sheegay in intii badnayd dhalinyaradii degmadaasi ay magaalada isaga tageen ka dib markii ay soo wajahday shaqo la’aan, maadaamaa deegaankaas uu ka mid yahay meelihii ay sida aadkaa u ragaadiyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Dhalinyarada ayaa intooda badan waxay shaqooyin iyo waxbarasho u raadsanaya magaalada Muqdisho iyo wadamada dariska, Shaakaal ayaa sheegay camal la’aanta dhalinyarada inay sababtay qaarkood inay bartaan balwadda oo horay halkaasi ay oga mamnuuceen xooggagii Alshabaab ee muddo gacanta ku hayay degmada Luuq.
Luuq hada waxaa maamusha DF ee Soomaaliya, inkastoo ay magaalada ku wada sugan yihiin ciidanka ASWJ iyo milatariga Itoobiya oo ah cududda ugu weyn gobolka.
Magaalada malaha kaabayaashii bulshada aasaasiga u ahaa sida waxbarasho,caafimaad iyo ganacsi taasi oo ay si weyn u dareemeen bulshada deegaanku.